DHIBAATOOYINKA LAGA DHAXLO SOO JEEDKA BADAN - Daryeel Magazine
DHIBAATOOYINKA LAGA DHAXLO SOO JEEDKA BADAN
1- Xasuusta oo yaraata: taas oo sababeysa in aad waxbarashada ku guuldareysto,iyo in aad noqoto qof aan qaadan karin go,aano adag oo sax ah,iyo in aad horu kac nolosha aad sameyn weyso maadaama noloshaada iyo wax qabadkaada aadan xasuusan karin.
2- wel wel iyo murugo badan:dadka hurdada ay ku yartahay wel welka iyo streska ayaa ku badan shan jibaar,marka loo fiiriyo kuwa caadiga ah,nolosha wax waliba waa ka wel welaan.
3- Dhiiga qofka oo kaca: xanaaqa ayaa ku badan,ugu danbeyntiina waxaa ku dhaca,cudurada sida dhiig karka iyo kuwo kale oo halis badan oo maskaxda saameyn ku yeelan kara.
4- lafaha oo dhib soo gaara: baaritaano la sameeyay waxaa lagu ogaaday in dadka aan si fiican u hurdin ay dhibaato ka soo gaarto dhuuxa oo ka dhamaada iyo macdanta lafaha ku jirta oo yaraata taas oo sababeysa in qofka lafa xanuun joogta ah ku dhaco ugu danbeyntiina socon waayo oo jiis noqdo.
5- jirka oo is difaaca ka dhammaato: taas oo suuru galineysa in cudurada dhammaan ay kugu dhacaan si fudud,taas oo halis galin karta nolosha qofka,lagana yaabo in cudur fudud oo halis badan lahayn u dhinto maadaama jirka uusan cudarada iska difaaci karin.
W/Q: Mohamed Deeq
Dhibaatooyinka Laga Dhaxlo Xirashada Kabaha Ciribta Dheer 7 Dhibaato Oo Laga Dhaxlo Dhafarka Badan Iyo Talooyin Ducada Hurdo La’aanta Iyo Soo Jeedka Xanuunada Iyo Dhibaatooyinka Laga Qaado Hurdo Yaraanta